त्रिभुवन नमाविको प्रथम त्रैमासिक परीक्षाफल प्रकाशन : राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड त्रिभुवनले हात पा-यो ! – ebaglung.com
२०७६ श्रावण १, बुधबार १७:०७	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
कमल पौडेल,बडीगाड, २०७६ साउन १ । त्रिभुवन नमुना माध्यमिक विद्यालय खर्वाङले अंग्रेजी माध्यम तर्फको प्रथम त्रैमासिक परीक्षाफल प्रकाशन गरेको छ। प्रत्येक कक्षामा प्रथम, व्दितिय तथा तृतिय हुने विद्यार्थीहरुलाई मेडल सहित पुरस्कृत गरिएको थियो।
सो कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उपप्रमुख विष्णु प्रसाद भुसालले विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको लागी कुनै कसर वाँकी नराख्ने वताए । शिक्षकहरुको मिहनेतले गुणस्तर वढ्ने भन्दै उपप्रमुख भुसालले अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयका संवद्ध पक्ष एकजुट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक ढालमणि भण्डारीले विद्यालयको भावी कार्यक्रमको विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रम सहायक प्रधानाध्यापक शिव पोखरेलको स्वागत मन्तव्य, शिक्षक कमल पौडेलको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो। नमुना विद्यालयको कार्यक्रम संचालन भैरहेको विद्यालयमा यस वर्ष देखि कक्षा ११, १२ तर्फ विज्ञान, वालि विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य र शिक्षा शास्त्र संकायमा भर्ना खुलेको बिद्यालयले जनाएको छ ।
यसैवीच बडीगाड गाउपालिकास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगीतामा त्रिभुवन नमुना माध्यमिक विद्यालय खर्वाङले हात पारेको छ । असार २२ र २३ गते भएको गाउँपालिका स्तरीय विविध प्रतियोगिता, त्यसको छनौटमा भएको जिल्ला स्तरीय प्रतियोगीता र त्यसको पनि छनौटको आधारमा भएको प्रदेश स्तरीय प्रतियोगीतामा सहभागीता र उपलब्धीको आधारमा उत्कृष्ठ विद्यालय छनौटमा परेको हो । जस अन्तरगत त्रिभुवन नमुना मावि खर्वाङ उत्कृष्ट, भानु मावि ग्वालीचौर प्रथम, खार मावि व्दितिय र बनस्पति मावि तृतिय भएका छन्। मंगलवार ग्वालीचौरमा एक कार्यक्रमका विच सो पुरस्कार तथा शिल्ड वितरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख मेहरसिंह पाइजाले खेल राष्ट्र र स्वास्थ्यको लागी भएको भन्दै प्रतिभा प्रस्फुटनको वातावरण गाउँपालिकाले वनाउने वताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपचन्द्र सुवेदी, वडा नं. ३ का अध्यक्ष खड्क पुन लगाएतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । सो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शिक्षा अधिकृत कृष्ण रेग्मीको अध्यक्षता तथा राजन पाइजाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो।